T A R A T R Y N Y L A S A: Andrianiaina Liva | NewsMada
T A R A T R Y N Y L A S A: Andrianiaina Liva
Fianakaviako faharoa ny baolina kitra
Olona miaina ao anatin’ny fanatanjahantena Andrianiaina Liva. Efa ao anaty rany mihitsy izany, ka anisan’ny taranja iainany hatramin’izao ny baolina kitra. Zanaka mpampianatra izy, ary mpanabe koa ny asany. Nitaiza azy tao anatin’ny fanatanjahantena ny rainy. Teo amin’ny faha-7 taonany no nanomboka nilalao baolina i Liva ka tao amin’ny Faivama Ivandry, hatramin’ny faha-20 taonany. Efa nandrombaka ny ho tompondakan’Antananarivo intelo misesy teo amin’ny sokajy «minime, cadet, junior, espoir”. Avy eo nanao D2, tao amin’ny AFA Alarobia. Ankehitriny, mikarakara ankizy ao amin’ny sekolin’ny baolina kitra FFI Ivandry ary ao anaty ekipa teknikan’ny Cosfa.
Anisan’ireo mpanaraka ny lalaon’ireo ekipa eto Madagasikara sy any ivelany, hatramin’izay, ny Me Liva. Porofon’izany, ny fifohazana tamin’ny 3 maraina, nilahatra teo Mahamasina, nijery ny lalaon’ny Dynamo de Fima, na FC BFV na BTM FC na Maitsovolo na Somasud. “Mbola gradin tokana ny teo Mahamasina tamin’izany ary tsaroako tsara ny nanatrehana ny lalaon’ny Club M nisy an-dry Ferdinand sy ry Rolland Kely, i Alban, sy i Egypta”, hoy izy.
Nitsiry teo aminy ny ho mpanazatra ka teo amin’ny faha-20 taonany, nitondra ankizy tany amin’ny fokontany ary anisan’ireny i Faneva Ima. Ny taona 2000, niatrika ny fifaninanam-pirenena teo amin’ny fanatanjahantena an-tsekoly tany Fianarantsoa. Taona 2003, nanapa-kevitra izy sy ny rainy, nanangana ny US EPN ka niatrika ny fifaninanana federaly. Ho fanamafisam-pahaizana, niatrika fiofanana maro i Liva, toy ny niarahana tamin’i Claude André sy i Patrick Drulet. Nahazo ny “licence C”, ny taona 2014. Herintaona taorian’izay, nanatevina ny ekipa teknikan’ny Cosfa ary mbola ao hatramin’izao.
Nahazo medaly alimo
Nitombo miandalana teny ny traikefany… Ny taona 2019, voatendry hitondra ny Barea U15, hanao ny CCCOI tany Maorisy, nahazoana ny medaly alimo. Tsy io ihany ny fivoahany tany ivelany fa efa nitarika ny Ecole Privée Nirina (EPN), tany Frantsa, ny taona 2005, niatrika ny fifaninanana an-tsekoly.
Tsy nanafina i Liva fa tena ilaina eo amin’ny baolina kitra ny fianarana. Io ilay “sport étude”. “Mora mandray ny zavatra ampitaina ireo ankizy nianatra”, hoy izy.
Fifaninanana any an-tsekoly
“Efa mandeha ny baolina kitra amin’izao”, hoy izy. Aminy, tokony haverina ireo fifaninanana any an-tsekoly, toy ny “Ossum” sy ny “Fosep”, nipoiran-dry Bolida sy ry Faneva Ima ary ry Paulin satria sady misy fanovozam-pahalalana no misy fanabeazana ara-batana, izany. Toy izany koa ny fifaninanam-pirenena ho an’ny tanora. Ankoatra izay, mila omena fampirisihana ireo klioba mpampiofana.
Ny tsara sy ny ratsy
Zavatra tsara niainany teo amin’ny baolina kitra, ny nahazoan’ny EPN ny ho tompondakan’i Madagasikara, U 17, ny taona 2005. Nafaitra teo aminy kosa ny nandavoan’ny Fosa Jr ny Cosfa teo amin’ny famaranana ny amboaran’i Madagasikara, ny taona 2018.
“Mila fitiavana sy finiavana ary hilofosana ny zavatra rehetra atao”, hoy i Liva.